Kushambadzira Chakavanzika Policy
Dhata rekushandisa dhizaini Iyi mutemo inotsanangura ruzivo rwatinoda kuti tushandise kutsigira kushambadza. Ndeapi mhando yeruzivo yatinounganidza? Kupa zvigadzirwa zvedu isu tinofanirwa kugadzirisa ruzivo nezve iwe. Rudzi rweruzivo rwatinounganidza zvinoenderana nemashandisiro aunoita zvigadzirwa zvedu. Unogona kudzidza kuti ...
Chii chinonzi Cold Stamping?
ne admin pane 19-08-08
Iyo tekinoroji Cold stamping inoenzanisirwa kune yechinyakare imwe yeHot Stamping zvese zviri zviviri zvinokwanisa kusvika kune yakajeka kuburitsa mhedzisiro yekutsika. Musiyano uripo pakati pavo ndewekuti kutonhora kutonhora hakudi kupisa kana kuchishandiswa. Ndiyo nyaya iyo inotonhora stampi ...
Yechinomwe China International All-India Exhibition yakabudirira kupera
ne admin pane 18-10-29
On Gumiguru 28 2018 rechinomwe China International All-India Exhibition rakabudirira kupera muShanghai. Nemusoro wenyaya we "kuvhura iyo nguva yekudhinda njere" gore rino zvese-mu-one ratidziro inoratidza zvizere mhedzisiro yekusimudzira uye kusimudzira maitiro ekudhinda tekinoroji mu ...
Kingfisher Labels inoisa yechinomwe Edale flexo muchina
ne admin pane 18-10-11
Kingfisher Labels iri muYate kuchamhembe kweBristol kuUK yatenga Edale FL3 muchina wayo wechinomwe wefrexo kubva kuUK michina inogadzira. Kingfisher Labels inoshandira chikafu chekuzora uye hutano neakazvishongedza mavara. Yakaisa yekutanga Edale flexo muchina muna 2001. Muchina wayo mutsva ...
Goverana zvekudhindisa zviwanikwa nevakwikwidzi Fairfax inovhara dzimba mbiri dzekudhinda
ne admin pane 18-09-28
Sekureva kwechibvumirano neanokwikwidza News Corp yekugovana zvinyorwa zvekudhinda muna Chikunguru gore rino nhepfenyuro yeAustralia Fairfax yakavhara nzvimbo mbiri dzekutsikisa muQueensland neNSW uye misika iri kuenderera mberi. Imwe yemidziyo yekudhinda iri muOrmiston 25 km kubva pakati pebhasi reBrisbane ...
Prati USA inogadza maneja
ne admin pane 18-09-18
Prati akatumidza Frank Hasselberg semunhu wekutungamira chikamu chayo chitsva muNorth America. Prati USA yakagadzwa sezvo kambani iri kutsvaga kusimbisa kuzvipira kwayo kumusika muNorth America. Hasselberg akamboshanda naKocher + Beck Heidelberg naGallus kuNorth America ...
Parkside inodyara zvakare mu laser zvibodzwa
Parkside yakakosha yekupakata kambani yaita imwezve yakakosha mari mu state-of-the-art laser michina yekugadzira mitsva bhizinesi mikana. Yayo yazvino laser inivhesitimendi inogonesa laser kurova pamativi maviri eimwe firimu kana laminate kugadzira nyore-kuvhura uye kudzikamisa kurongedza dhizaini ...
Avery Dennison anotangisa zvishandiswazve PET liners muEurope
ne admin pane 18-08-30
Avery Dennison akazviti ndiye wekutanga kumanikidza-kunetseka kunyora zvinhu zvekutengesa kuti aunze liner rakagadzirwa kubva kuRetet yakadzokororwazve (rPET) kutengeserana muEurope. Iyo nyowani rPET liner inoshandisa zvakanyatso sarudzwa post-yevatengi marara uye ichaunzwa muna Gumiguru 2018 pane dzinoverengeka dzekuzvipira ...
Kodak kutengesa flexographic kurongedza kupatsanura
ne admin pane 18-08-16
Kodak ndeyekutengesa yayo flexographic kurongedza kupatsanura ichibvumidza iyo kutarisa kune ezvakatenderedzwa mahwendefa bhizinesi inkjet workflow software uye brand rezinesi. Chikamu chinogadzira nekushambadza iyo Flexcel NX sisitimu yeanoshandira imaging michina yekudhinda mahwendefa ekushandisa uye nehumwe husevhisi ...
Amcor inowana mukwikwidzi Bemis kumhara paNASDAQ
ne admin pane 18-08-08
Iyo indasitiri yekurongedza inosangana nematambudziko mazhinji nekuda kwekukwira mbishi zvinhu Semumwe wemakambani epamusoro ekurongedza pasi Amcor (ASX: AMC) yakataurirana nemukwikwidzi wayo weUS Bemis kweinopfuura gore uye yave kuda kusvika chibvumirano chekutora kambani yeA $ 7 bhiriyoni inova e ...
Inovar Packaging inowana Topp Labels
ne admin pane 18-07-25
Inovar Packaging Group yakawana Topp Labels ichiwedzera kugona kwayo kushandira misika muFlorida neSoutheastern US. Inotungamirwa muDallas Texas Inovar ndeye yakasarudzika shanduko yemahara mavara anodzikisa maoko uye zvinogadziriswa zvigadzirwa zvekupakata. Iyo inoshanda yeblue-chip vatengi mukati medhivhuru ...
NPA ZVITENZO MAERSKLINE UYE ZVITATU ZVIMWE ZVOKUTAIRA ZVIMWE
ne admin pane 18-07-19
Sechikamu chekuyedza kugadzirisa kuratidzira kwakaitwa nevatyairi vemarori kuLagos Port Complex (LPC) neTin Can Island Port (TCIP) Lagos iyo Nigerian Ports Authority (NPA) yakazivisa kumiswa kwemazuva gumi emasevhisi emakambani eKutumira mana. pakutanga. Izvo zvakakanganiswa Kutakura Comp ...
polyester firimu, kupisa lamination firimu, Hot Stamp, Hot Foil, Hot Angazvidzvisa tsikwa, vakagadzira simbi bopp vagadziri,